केहि गरि तपाईको शरिरको कुनै अगंमा काटियो भने यसो भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्तो कुराहरु - All Nepal
हातलगायतका अंग छिन्दा जतिसक्दो चाँडो काटिएको अंगलाई सुक्खा प्लास्टिकको थैलो, सर्जिकल पञ्जा आदिमा सुरक्षित रूपले राख्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो अंगलाई अर्को प्लास्टिकको थैलोमा करिब २ देखि ४ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रमको पानीमा डुबाएर राख्नुपर्छ ।
तापक्रम त्यति नै बनाउन थैलोको पानीमा बरफ मिसाउन सकिने चिकित्सक बताउँछन् । ‘पहिलेका केही घटनामा हातलाई पानीमा डुबाएर ल्याइएको थियो,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सर्जन डा. ईश्वर लोहनी भन्छन्, ‘काटिएको भागलाई पानी वा स्लाइनमा डुबाएर राख्नु हुँदैन ।’ बरफको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा समेत काटिएको अंगलाई राख्नु हुँदैन ।
सामान्य तापक्रममा काटिएको अंग राखेर ल्याउँदा करिब ६ घण्टासम्म जोड्न मिल्ने भए पनि कम तापक्रममा सुरक्षित प्रकारले राखेर ल्याउँदा ८ देखि १० घण्टाभित्र समेत जोड्न सकिन्छ । छिनेका अंगमा पनि धारिलो हतियारले काटेको भाग जोड्न सजिलो हुने उनी बताउँछन् ।
‘मेसिनमा अड्किएर छिनेको, साइकलको चेनमा अड्किएको, निकै क्षत–विक्षत भएको अंग जोड्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा सबै सुविधा उपलब्ध हुँदा जोड्न सकिन्छ ।’, कान्तिपुरमा खबर छ ।